Online Juction Feed: 2015-05-03
फोनको घण्टी - शेखर ढुङ्गेल
मध्य रातमा ट्रिरिङ...ट्रिरिङ... फोनको घण्टी बज्यो । दिनभरको थकाइले चूर भएर मस्त निन्द्रामा परेको किरणका लागि त त्यो बमको धमाका जस्तै लाग्यो । मनमा धेरै आशङ्काहरूले परेड खेल्न थाले । हुन पनि सुखको खेती गर्न परदेशमा बसेको बिचरो किरणका लागि मध्य रातमा बजेका हरेक घण्टीले अशुभ समाचार मात्र सुनाउँदै आएका छन ।
दशक बितिसक्यो किरण लाहुरे बनेको । निम्न वर्गीय परिवारमा सानै छादा बाबु गुमाएको किरणले आवश्यक शिक्षा पाउन सकेन । परिवारको जेठो छोरो थियो ऊ - तीन भाइ र दुई बहिनीहरूको शिक्षा, विवाह अनि विधवा आमाको रेखदेखमा भएको जग्गाजमिन केही बेच्यो त केही जमिनदारकोमा चर्को ब्याजमा धितो राखेको थियो । जागिर खोज्ने प्रयास शिक्षाको अभावमा सफल भएन । भारतीय र बेलाइती पल्टनमा कोसिस गर्यो, सफल भएन । हुर्कंदै गरेका दुई सन्तानको खर्च पनि बढदै थियो । पहुँच, सिफारिस, कोसेली केही पनि जुटाउन नसक्ने किरणका मनमा भविष्यमा सुख पाउने र वर्तमानको माग पूरा गर्ने एउटै मात्र उपाय विदेश गएर मजदुरी गर्न जुर्यो । निक्कै प्रयासपछि बल्ल अरबमा एउटा काम मिलेको थियो - भेडाका बथानसित लाप्पा खेल्दाखेल्दै दशक बितेको उसलाई पत्तै भएन । तर उसको शारीरिक, मानसिक र पारिवारिक अवस्थामा आएको उथलपुथलले भने किरणको जीवनले धेरै सुनामी पार गरिसकेको छ । धेरै आँधीका धक्काले किरणका आासु सुकाइसकेको छ । कमजोर, शिथिल अनि नीरस किरण कसैको आशाको त्यान्द्रो मात्र भए पनि ऊ आफ्नै लागि आशावादी छैन । समयान्तरले उसका सपनाहरू बदलिएका छन । उसका बाटाहरू भत्किसकेका छन, उसको गन्तव्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ ।
यो घण्टीले पनि अशुभ समाचार नै लिएर आएको त होला नि ! उसमा फोन उठाउने चाहना रहेन । बरु प्रत्येक घण्टीसागै ऊ अतीतमा फर्कियो । लाहुर हिँडेको तेस्रो वर्षको एक रात बजेको घण्टीसागै ‘घरको फोन आयो’ भनेर खुसीले उफ्रेर फोन उठाएको मात्र के थियो उताबाट किरणकी आमाले रुँदै सुनाइन - जीवनमा सागै बाँच्ने सँगै मर्ने बाचासहित सिन्दुर लाएकी किरणकी पत्नी सीताले किरणसित अब आशा भरोसा नरहेको भन्दै दुई नाबालक बच्चालाई सासूको जिम्मा लगाएर सुख खोज्न अर्कै पुरुषको हात समाती हिँडेको समाचार सुनाएकी थिइन । त्यो रात पहिलो चोटि विदेशमा खुबै रोएको थियो किरण । उनीहरूकै सुख खोज्न आफ्नो जवानी धितो राखी मुग्लान पसेको किरणको भक्कानो छुटेको थियो त्यो रात । त्यसपछिका दिनहरू न निन्द्रा न भोकमा बित्तै गएका थिए । चाँडै घर फर्कने विचारले किरण अधिक काममा खटन थालेकाले कमजोर बन्दै गएको थियो । फर्कने इच्छा नगरेको होइन किरणल तर के गरोस ? उसको लाहुर आउँदा लागेको ऋण तिर्दै थियो । कमाएजति साहूको ब्याज र स्याज अनि बच्चा र जीवनसागिनीको खुसका लागि खर्चंदै किरण खाली हात थियो । खाली हात लिएर कसरी फर्कने ? केही कमाउने अनि स्वदेश गएर केही गर्ने सोचेर किरण मरुभूमिको रापमा पिल्सिएर काम गर्दै जीवनयात्रा लम्ब्याउँदै थियो - आफ्ना सबै खुसी, यौवन र उमङगलाई
खरानी बनाएर ।
केही महिनापछि एक रात यसरी नै आफ्नी जन्म दिने आमा र मातृभूमि सम्झेर आँसु झार्दाझार्दै
निदाएको थियो ऊ । ट्रिरिङ...ट्रिरिङ... को आवाजसागै उसले झम्टेर फोन उठायो । उताबाट आएको भाइको आवाजमा ‘दाइ, आमाले तपाईंको बाटो हेर्दाहेर्दै यो संसार छोडेर जानुभयो आज........’ भन्ने बाक्य के सुनेथ्यो थप सुन्ने र सोध्ने साहस भएन । उसका आँखाबाट बलिन्द्र आँसु टप्किन थाले, हात– खुटटा कामे, रातभर रोयो, छटपटायो । मरुभूमिको गोठमा उसको रोदन सुन्ने अनि सान्त्वना दिने को थियो र ? जीवनको बाँकी यात्रा अब पूरा भएजस्तो लाग्यो किरणलाई । ऊ काममा पनि गएन त्यो दिन । साहूले नोकरीबाट
निकालिदियो । उसलाई बिस्मात लागेन किञ्चित पनि । घर फर्कने सोचेको थियो तर के गरोस् भएको पैसा अस्ति मात्र आमालाई दशैँ मनाउन पठाएको थियो । हवाईखर्चसमेत थिएन । चिनेका साथीहरूसित बिन्ती गर्यो, साथीहरूको पनि व्यथा उस्तै थियो । फर्कने खर्चकै लागि किरण फेरि अर्को ठाउँमा काम गर्न थाल्यो । आमालाई सम्झेर घरीघरी रोइरहन्थ्यो किरण ।
एक दिन साहूको ऋणको हिसाब गर्यो - साँवा जति त ब्याजमै तिरिसकेको रहेछ किरणले । आफ्नो बास भएको घरजग्गा मात्र फिर्ता पाए पनि गाउँ फर्कने र त्यहीँ मर्ने इच्छा सुनाएको थियो केही दिनपहिले साहूलाई फोन गरेर किरणले । साहूले कुनै जबाफ नदिई फोन राखेको थियो । किरण विक्षिप्त हुँदै ‘मरुभूमिमै मरिने हो कि,बालबच्चाको के हाल होला’ भनी सोच्दै पिल्सिरहेको थियो । दिनप्रतिदिन अशक्त पनि हुँदै गएको किरणको निन्द्रामा समेत आशावादी हुने सपनाहरू आउन छाडिसकेका थिए ।
ट्रिरिङ...ट्रिरिङ... घण्टी बजि नै रहेको थियो । किरणको मस्तिष्कमा अनेकौँ अशुभ कुरा खेलिरहेका थिए । एउटा ट्रिरिङ...ट्रिरिङ... नसकिँदै अर्को पटक फेरि बज्न थाल्यो । किरण झन् अत्तालियो । पक्कै केही अशुभ भयो र त्यसको खबर आयो भनेर । मनले नमानीनमानी फोनमा हात पुर्यायो किरणले ‘हेल्लो’ भन्न भ्याएको थिएन, उताबाट कुरो सुरु भइहाल्यो । यस्तो खबर आउला भनेर त किरणले कल्पनासमेत गरेको थिएन । फेरि एक पटक किरणका आँखाबाट तरर आँसु बगे । ...साहूजी, साहूजी । ...किरण बोल्न सकिराखेको थिएन । उताबाट साहूजी बोल्दै थिए... । जिज्ञासानै जिज्ञासाले किरणका मनमा प्रश्नहरूको बाढी ल्याएको थियो । आजपनि उसको निन्द्राले बिदा लियो । किरण आफ्नो गुन्टा बाँध्न थाल्यो ।
आँखाबाट आँसु बग्न रोकिएको थिएन । बिहान सबेरै राताराता आाखा लिएर ऊ साथीको कोठामा पुग्यो । सबैसित अङकमाल गरेर बिदा माग्यो । साथीहरूलाई विश्वासै भएन किरणको कुरामा, उनीहरूले शुभयात्राको कामना गरे । धेरै वर्षपछि किरणको आँखाबाट खुसीको आँसु झरेको थियो । किनकि किरणको साहूले उसको परिवारको बेहाल देखेर किरणलाई ‘स्वदेश फर्कोस’ भनेर घरजग्गा
फिर्ता मात्र पठाएका थिएनन्, मरुभूमिको पोस्ट बक्समा हवाईजहाजको टिकटसमेत पुर्याइदिएका थिए ।
- May 06, 2015 Links to this post
मोमिलाको - "ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान" - Download
मोमिलाको - "ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान" को ई-बुक (pdf. format) मा निःशुल्क डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
- May 05, 2015 Links to this post
Labels: कविताको ई-बुक
मेरो कविताको अन्तिम पृष्ठ - Download
मेरो कबिताको अन्तिम पृष्ठको ई-बुक (pdf. format) मा निःशुल्क डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
उत्कृष्ट दश पप गितहरुको म्युजिक ट्रयाकहरु : collection of top 10 pop song karaoke
आफुलाई मन पर्ने गितको शिर्षकमा क्लिक गरेर म्युजिक ट्रयाक (karaoke without voice) डाउनलोड गर्नुहोस्र र आफै गित गाउनुहोस् :
• रोसन गुरुङको - "यहाँ यस्तै छ..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोडगर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• त्रिलोक रानाको - "तिमी जस्तो छैन कोही" - गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• सुगम पोखरेलको "मेरो संसार नै हौ तिमी नै हौ..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• यश कुमारको - "हिजो अर्कै संग देखें, आज अर्कै संग देखैं..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• सबिन राईको - "गुराँसको फेद मुनि, सम्झनाको छाँया..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• यम बरालको - "बादलुको घुम्टोले..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• यश कुमारको - "म आफ्नै आगनमा..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• दिपेश किशोर भट्टराईको - "एकै नजरमा..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गरयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
• 1974 AD ब्याडको - "यो मन त मेरो नेपाली हो..." गितको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Labels: karaoke, karaoke of pop song, nepali karaoke
Labels: नाटक र एकांकी